Hal Kaniisad, Dhalasho Cusub, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku barakeeyey Kaniisadda Adduunka ee Ilaah kobcin aan hore loo arag oo ku saabsan fahamka caqiidada iyo dareenka adduunka nagu hareereysan, gaar ahaan Masiixiyiinta kale. Laakiin heerka iyo xawaaraha isbeddelada tan iyo geeridii aasaasihii Herbert W. Armstrong ayaa la yaabay taageerayaasha iyo kooxaha ka soo horjeedaba. Waxaa mudan in la joojiyo in laga fekero wixii naga lumay iyo wixii aan ku guuleysanay.
Waxaan aaminsanahay iyo wax qabadkeena waxaa hogaamiyayaasheena guud ahaan Joseph W. Tkach (aabahay), oo ku badalay Mr. Armstrong xafiiska, waxaa loo marayaa hanaan socod dib u eegis ah. Intii aabaay dhiman, wuxuu iga dhigay dhaxalkiisa.
Waxaan ku faraxsanahay qaabka hogaaminta kooxeed ee uu aabahay soo bandhigay. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay midnimada ka dhex taagneyd kuwii isaga taagnaa ee sii wada taageerada aniga ahaan markii aan u hoggaansanaano awoodda Qorniinka iyo shaqada Ruuxa Quduuska ah.
Waa la waayey fikirkeenna xagga tafsiirka sharciga ah ee Axdiga Hore, aaminsanaantayada in Ingiriiska iyo Mareykanka ay yihiin farcankii reer binu Israa’iil «Israa’iil British», iyo ku adkaysigeenna ah in maamulkeennu uu xiriir gaar ah la leeyahay Ilaah. Waxay ku dhammaatay cambaareynteena cilmiga caafimaadka, adeegsiga waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo ciidaha masiixiga ee dhaqanka sida Ciidaha iyo Kirismaska. Aragtideenii hore ee ahayd in Eebbe yahay qoys jinniyo lama tirin karo oo dadka ku dhalan karo ayaa la diiday, laguna beddelay aragtida kitaabiga ah ee saxda ah ee Ilaah ka jiray saddex qof weligood, Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah .
Waxaan imminka qaabilaynaa una doodeynaa dulucda udugga ee Axdiga Cusub: nolosha, dhimashada, iyo sarakicidda Ciise Masiix. Shaqada furashada Ciise ee aadanaha ayaa hadda ah diiradda qoraalkeenna ugu weyn "Xaqiiqda Fudud" halkii laga filayn lahaa sheegiddii nebiyada ee dhammaadka. Waxaannu ku dhawaaqaynaa in si buuxda oo hufnaan leh uu dhibbane u yahay Sayidkeennu uga badbaadiyo ciqaabta dilka dembiga. Badbaadada waxaan ku bari karnaa nimco kusalaysan iimaanka kaligiis, adoon u isticmaalin wax nuuc ah, Waxaan fahamsanahay in shaqadeena masiixiga ah inay tahay waxbarid, mahadcelin ku dheehantahay shaqadii Eebbe inagu siiyay - "Waxaan jecel nahay maxaa yeelay isagu wuu inagu jeclaaday marka hore" (1 Yooxanaa 4:19) - shaqooyinkaasna kuma lihi annagu uma qalanto "waxna" kuma qasbinno Eebbe inuu inaga istaago. Sida uu William Barclay dhigay: "Waxaa naloo badbaadiyay shaqooyin wanaagsan, ee ma ahan shaqooyin wanaagsan".
Aabahay wuxuu u cadeeyay Kaniisadda waxbarista qoraalka ah ee ah in Masiixiyiintu ay ku hoos jiraan axdiga cusub, ee ayan ahayn kuwii hore. Waxbaristu waxay noo horseeday inaan ka tagno baahiyihii hore - in Masiixiyiintu ay u hayaan maalinta toddobaad ee sabtida inay ahaadaan maalin quduus ah, in Masiixiyiintu ay waajib ku tahay inay ilaaliyaan maalmaha ciidaha sanadlaha ah ee lagu amray dadka sida ku xusan Laawiyiintii 3 iyo 5, in Masiixiyiintu ay ka go'antahay in la bixiyo saddex-meelood meel iyo in Masiixiyiintu aan loo oggolaan inay cunaan cuntooyinka loo arkay inay nijaas yihiin marka loo eego axdigii hore.
Dhamaan isbedeladaan toban sano gudahood? Inbadan ayaa hadda noo sheegaya in saxitaanka koorsada weyn ee weynaantaani aysan lahayn isbarbar dhig taariikhi ah, ugu yaraan tan iyo maalmihii Kaniisadda Axdiga Hore.
Hoggaanka iyo xubnaha daacadda u ah Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay si qoto dheer uga mahadnaqayaan nimcada Ilaah ee naloogu hoggaamiyey iftiinka. Laakiin horumarkayagu kharash la'aan. Dakhliga ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, waxaan luminay malaayiin doollar waxaana nalagu qasbay in aan hoos u dhigno boqolaal shaqaale muddo dheer shaqeynayay. Tirada xubnaha ayaa yaraatay. Dhowr qaybood ayaa naga tagay si aan ugu noqono mid ama caqiidadii hore ama mawqif dhaqameed. Natiijo ahaan, qoysaska kala tegay iyo saaxiibtinimadii ayaa laga tegay, oo mararka qaarkood xanaaqsan, xanun dareema iyo eedaymo. Waxaan aad uga xun nahay waxaanna u duceyneynaa in Eebbe siiyo caafimaad iyo dib u heshiisiin.
Xubnaha looma baahna inay lahaadaan caqiido shaqsiyadeed xagga aaminsanaheena cusub, sidoo kale xubnaha looma fileynin inay si otomaatig ah u qaataan aaminsanaheena cusub. Waxaan carrabka ku adkeynay baahida loo qabo aaminaad shaqsiyeed xagga ciise masiixiga, oo waxaan faray wadaaddadayada inay dulqaad la yeeshaan xubnaha ayna fahmaan dhibaatooyinkooda xagga fahamka iyo aqbalaadda isbeddelka caqiido iyo maamul.
In kasta oo ay khasaare nafeed haysteen, wax badan ayaan ka helnay. Sida Bawlos u qoray, waxkasta oo faa iido inoogu jiray wixii aannu hore u soo bandhignay, waxaan hadda u tixgelinaynaa in waxyeello loo yeesho Masiixa aawadiis. Waxaan ka helnaa dhiirigelin iyo dhiirrigelin annagoo garowsanna Masiixa iyo xoogga sarakiciddiisa iyo bulshada dhibaatadiisa, oo sidaas daraadeed laysula dhigay dhimashadiisa iyo helitaanka sarakicidda kuwii dhintay (Filiboy 3,7-11).
Waxaannu ugu mahadnaqaynaa kuwa kale ee Masiixiyiinta ah - Hank Hanegraaff, Ruth Tucker, David Neff, William G. Brafford, iyo asxaabteena ka tirsan jaamacadda Pazusa Pacific, Semlerary Seminary, cilmiga barashada cilmiga, iyo kuwa kale - oo gacmahayaga u fidiyay bulshada markii aan aadayno. si daacad ah ugu dadaal inaad raacdo Ciise Masiix rumaysad. Waxaan soo dhaweynaynaa ducada aan ka mid nahay oo aan ahayn urur yar oo keliya, oo ah muuqaal ahaan jidhka ah, laakiin aan nahay jidhka Masiixa, bulshada ah kaniisada Ilaah, iyo inaan sameyn karno wax walba oo aan kari karno si aan uga caawino ka caawinta injiilka Ciise Masiix. si aad ula wadaagto adduunka oo dhan.
Aabahay Yuusuf W. Tkach wuxuu isu soo gudbiyay runta Qorniinka. Markii uu wajahay mucaarad, wuxuu ku adkaystay in Ciise Masiix yahay Rabbiga. Isagu wuxuu ahaa addoon aamin ah oo aamin ah oo Ciise Masiix ah, kaasoo Ilaahay u oggolaaday inuu ku hoggaamiyo isaga iyo Kaniisadda Dunida oo dhan ee hodantinimada nimcadiisa. Anigoo ku tiirsanayna Ilaah xagga iimaanka iyo tukashada firidhsan, waxaan ku talo jirnaa inaan si buuxda u sii wadno dariiqii Ciise Masiix nagu dejiyey.